तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असोज १९ गते,शुक्रबार। | Ekhabar Nepal
तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असोज १९ गते,शुक्रबार।
धार्मिक असोज १९ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल असोज १९ गते। शुक्रबार। इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर ५ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष। तिथि– एकादशी,
अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। साझेदारीमा देखिने समस्याले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। बेसुरमा वचन दिनाले दुःख पाइनेछ। तापनि, साथीभाइले साथ दिनेछन्। पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ हुनेछ। मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा लाभ मिल्नेछ। परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ।
धेरै बोल्दा समस्या आउन सक्छ। केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। परिबन्धले समस्या निम्त्याउने देखिएकाले आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। सानोतिनो समस्या आए पनि चिताएको काम बन्नेछ। प्रयत्न गर्दा आयस्रोत बढ्नेछ भने पछि फाइदा हुने काममा सम्झौता हुन सक्छ। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्नुहोला। पहिलेका कमजोरी सुधार हुनेछन्।
बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त होला। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ भने नयाँ कामको प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ। अघिल्लो नतिजाले काममा हौसला जगाउनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरू पनि प्रशस्तै भेटिनेछन्। मनग्य धनलाभ हुने समय छ।
सोखले खर्च बढाए पनि अर्थअभाव हुँदा सहयोगीहरू फेला पर्नेछन्। चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। भैपरी आउने समस्याले खर्च गराए पनि सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा नै हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई ध्यान दिनुहोला। खर्च लागे पनि यात्राको योग छ। दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने अवसर जुट्न सक्छ।
विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। तर व्यवहारमा नैतिक संकट भने देखापर्न सक्छ। केही असहज परिस्थिति समेत सामना गर्नुपर्ला। अरूको विश्वास जिते पनि आफ्नाले धोका दिन सक्छन्। अवसरका लागि विवादास्पद काममा जुट्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। तथापि मिहिनेत गर्दा कर्मफल प्राप्त हुनेछ। लगनशीलताले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ।
स्वास्थ्य कमजोर रहनाले चिताएको काममा विलम्ब हुनेछ। जिम्मेवारी भने बढिरहनेछन्। अरूका काममा जुट्नुपरे पनि सहयोगीहरूको साथ मिल्नाले समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थिति आए पनि बुद्धिको उपयोगले प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। धार्मिक अनुष्ठान र मंगलमय कृत्य सम्पादन हुनेछन् भने सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ।
पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि केही समस्या आइपर्ला। स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनुहोला। तत्काल लाभ नभए पनि मिहिनेत गर्दा सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। चिताएको कामबाट आंशिक फाइदा उठाउन सकिनेछ। आस मारेको कामले पछिका लागि उत्साह जगाउनेछ।
पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन्। काम बिग्रने भयले सताउन सक्छ। सामान्य घरेलु कामले अल्झाउन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नुपरे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। हठ गर्ने बानीले दुःख पाइएला।
अप्रिय समाचारले मन खिन्न हुनेछ। खानपानको असावधानीले स्वास्थ्य कमजोर बन्ला। पढाइलेखाइमा समय दिन नसकिएला। व्यावसायिक काममा त्यत्ति फाइदा नहोला। काममा अवरोध आउन सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइएला। साँझदेखि मिहिनेतले नाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। चिताएका काम बिस्तारै सम्पादन हुनेछन्।